Rex Tillerson oo dhaleeceeyay xiriirka Afrika iyo Shiinaha - BBC News Somali
Rex Tillerson oo dhaleeceeyay xiriirka Afrika iyo Shiinaha
Image caption Rex Tillerson ayaa khudbad ak jeediyya Jaamacadda George Mason ee Virginia
Mr Tillerson ayaa sidoo kale ku dhawaaqay qorsha gargaar bina'aadanimo oo dhan $533 milyan oo doolar.
Inta uu booqashada ku joogo qaarada waxa uu ka shaqayn doonaa sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka, ka dib markii madaxwayne Donald Trump la sheegay in bishii January uu hadalo aflagaado ah u adeegsaday wadamada qaaradda Afrika.
Waxa uu hal ku dhig uga dhigay booqashadiisa ka hortaga argagixisada,dimuqraadiyada ganacsiga iyo maalgashiga.
Mr Tillerson ayaa si kulul u cambaareeyay dowladda Shiinaha.
Shiinaha iyo Mareykanka oo ka wadahadlaya xaalaad k/waqooyi
Waxa uu sheegay in maalgalinta Shiinaha uu muhim u yahay sare u qaadida kaabayaasha dhaqaalaha Afrika , balse qaabka ay arrintaasi u wajahayso uu horseeday deemo badan iyaga oo abuuray shaqooyiin yar.
Labaatankii sano ee ugu dambeysay ganacsiga u dhaxeeya Shiinaha iyo Afrika ayaa sare u kacay taasi oo sare u qaaday damaca Shiinaha ee macdanta qaaradda.
Si kastaba ha ahaatee shirkadaha dhismooyiinka ee Shiinaha ayaa si aad ah sare ugu qaaday kaabayaasha dhaqaalaha ee muddada dheer la dayacay sida wadooyiinka dhowr dal.
"Ammaanka iyo dhaqaalaha dalkeena ayaa waxa la xiriiraa Afrika sidii hore si ka badan," ayuu yiri Mr Tillerson
Xoghayaha arrimaha dibadda ayaa intaa ku daray in gargaarka bina'aadanimo uu caawin doono dadka ay haysto gabaabsiga dhanka cunnada iyo dagaaladda ee ku sugan Soomaliya, Koonfurta Sudan, Itoobiya iyo Chad.
Mr Tillerson ayaa sheegay in booqashooyiin badan uu horey ugu tagay Afrika.
Fariinta muhimka ah ee Rex Tillerson ayaa ah in uu saaxib dhab ah la yahay Afrika taasi oo ka duwan tan Shiinah.
Mareykanka ayaa wax badan ka qaban doona sidii lo yareyn lahaa caqabadaha ganacsiga iyo maalgashiga haysta Afrika.
Ku dhawaaqidiisa in gargaar bina'aadanimo ay siinayaan dhowr dal oo halis ugu jira macaluul ayaa ah mid la soo dhawayn doono.
Balse Mr Tillerson ayaa la shaqeeyaa in uu u shaqeeyo madaxwayne marar badan ka hadlay in uu dhimmi doono culayska Mareykanka ka haysta dibadda.